१५ दिनभित्र चोरी नरोकिए ललितपुर अन्धकार बनाइदिने कुलमानको चेतावनी
ललितपुर । सबैभन्दा बढी विद्युत चोरी हुने क्षेत्रमा पर्ने ललितपुरमा वर्षौदेखि हुँदै आएको चोरी रोकिएको छैन् । ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा वषौंदेखि संगठित रुपमा विद्युत चोरी भईरहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाईन..
साझा यातायातले नयाँ २९ वटा बस ल्याउँदै, उपत्यका र लामो दूरीमा चल्ने
ललितपुर। साझा यातायातले २९ वटा बस थप गर्ने भएको छ । उपत्यकाभित्र चल्ने र बाहिरका लागि समेत गरेर २९ वटा नयाँ बस ल्याउन लागिएको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले..
छ महिनामा ५४ अर्बको घरायसी सामाग्री आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घरायसी वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा ५४ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८५ हजार..
केएल टावरमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको ‘सेल मेला’
काठमाडौं । राजधानीको चाबहिल स्थित केएल टावरमा ‘दामी सेल’ मेला सुरु भएको छ। मेलामा ४५ स्टलमा तीन हजारभन्दा बढी सामानमा ५० प्रतिशतसम्म छुटसहित राखिएको टावरले जनाएको छ। शनिबारबाट सुरु भएको मेला..
भ्यालेन्टायन डेका लागि सवा करोड रुपैयाँको रातो गुलाफ
काठमाडौँ । यस वर्षको प्रणय दिवसका लागि भारतबाट एक करोड २५ लाख बराबरको रातो गुलाफ आयात गरिने भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ३५ हजार स्टिक गुलाफ बढी हो। अघिल्लो..
इ-सेवाका सेवाग्राही ६० लाख पुगे, कम्पनी नवौँ वर्षमा
काठमाडौं । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे कम्पनी ‘इ-सेवा फोन पे प्रा लि’ नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २००९ को अन्त्यमा बेटा भर्जज रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट बिधिवत रूपमा..
काठमाडौंको सामाखुसीमा पैँचो पसल
काठमाडौं । राजधानीको सामाखुसी चोकमा पैँचो पसल प्रालिको आधिकारिक बिक्री कक्ष सुरु भएको छ। पहाडी भूभागको उत्पादनबाट खाद्य वस्तु प्याकिङ तथा वितरण गरिरहेको पसलले राजधानीमा विक्री कक्ष संचालनमा ल्याएको हो। बिक्री..
कोका-कोला मोःमोत्सवमा उपभोक्तालाई मःम र कोक चखाउँदै वर्षा
काठमाडौं । कोका-कोला मोःमोत्सवमा मःम र कोका-कोलाको कम्बो अनुभब उपभोक्ताहरुलाई गराउनका लागि चर्चित मोडल तथा नायिका बर्षा सिवाकोटीले बिभिन्न आउटलेटहरुमा गएर यो उत्सव सेलिब्रट गरिरहेकमी छिन् । उनी आफ्ना फ्यानहरुसाग..
गुल्मी । गुल्मीको रिडीमा सञ्चालन भएको रिडी मेलामा यस पटक ३७ करोडको कारोवार भएकोे छ । मकर सङ्क्रान्तिदेखि पाँच दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त मेलामा राखिएका ५०० भन्दा बढी स्टलबाट उक्त..
आठ हेलिकप्टर कम्पनीले विमानस्थललाई ५४ लाख रुपैयाँ तिरेनन्
काठमाडौं । आन्तरिकरुपमा उडान गरिरहेका आठ हेलिकप्टर कम्पनीले रु ५४ लाख २३ हजार ६५१ रकम तिर्न अटेर गरेका छन् ।आन्तरिकतर्फ उडान गरिरहेका कूल १८ वायु सेवा कम्पनीमध्ये आठ वटा हेलिकप्टर..
६ दिनमा कति कमायो दयाहाङको ‘मिस्टर झोले’ले ?
काठमाडौं । दयाहाङ राई स्टारर नेपाली चलचित्र 'मिस्टर झोले'ले ६ दिनमा २ करोड ४८ लाख ग्रस कमाइ गरेको छ । निर्माताले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कलेक्सन सार्वजनिक गरेका हुन् । काठमाडौंबाट..
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमकाअनुसार पेट्रोलमा १ रुपैयाँ..
सिटी एक्सप्रेस र सिगे मनी ट्रान्सफर ग्लोबलबीच सेवा थालनी
काठमाडौं । लण्डनको ख्यातिप्राप्त रेमिट कम्पनी सिगे मनी ट्रान्सफर र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सेवा सुरु भएको छ । सिगे मनी ट्रान्सफरको विश्वभरी १३० भन्दा बढि देशहरुमा आफ्नै सञ्जाल..
घरजग्गा किन्न, बेच्न र भाडामा लिन–दिन अब ‘घरजग्गाको साथी’ मार्फत, ०.५ प्रतिशतमै पाइने
काठमाडौं । घर तथा जग्गा किन्न, बेच्न र भाडामा लिन–दिनको लागि अब संस्थागत रूपमै ‘घर जग्गाको साथी’ मार्फत कारोबार गर्न सकिने भएको छ । राजधानीको दरवारमार्गमा रहेको हाइल्याण्ड प्रोपर्टिजले ‘घरजग्गाको..
काठमाडौँ । उद्योग विभागले हालसम्म सात हजार २६० उद्योग दर्ता गरेको छ । ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योग दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले हालसम्म सात हजारभन्दा धेरै उद्योग..
चितवन। गोरखा भूकम्पले २०७२ साल वैशाख १२ गते राजधानी काठमाडौं सुन्धाराको धरहरा ढालेपछि अहिलेसम्म अर्को नबनाउँदा सर्वत्र चासो व्याप्त छ तर त्यसैलाई याद दिलाउने गरी चितवनको रत्ननगरस्थित टिकौली चौरमा धरहरा..
एनसेल बेच्ने टेलियालाई १५ दिन भित्र ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्न अल्टिमेटम
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको शेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिएको टेलिया कम्पनीलाई शेयर विक्री गर्दा पाएको लाभ वापतको लाभकर तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । टेलिया कम्पनीको स्विडेन..
इन्धनको मूल्य बढ्यो, पेट्रोल अब लिटरको १०२ रुपैयाँ, खाना पकाउने ग्यास पनि महंगियो
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो..
६० लाख रुपैयाँमा सरकारले किन्यो पहिलो विद्युतीय कार
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले इलेक्ट्रिक कार खरिद गरेको छ । यो सरकारी स्रोतबाट खरिद गरिएको पहिलो विद्युतीय सवारी साधन भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्लेका अनुसार..
वैशाखदेखि घरबाटै कर तिर्न सकिने, डिजिटल पेमेन्ट सुरु हुने
काठमाडौं । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलनलाई सरल बनाउन..
१५ दिन मै फेरी बढ्यो इन्धनको मूल्य, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १५ दिनको अन्तरमा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले मंगलवार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर..
आफ्नै नाफाबाट बृद्ध भत्ता, सुत्केरी भत्ता र किरिया खर्च दिदै सहकारी, पचास पैसा लगानीबाट करोड नाफा
पाल्पा। पचास पैसा लगानीबाट स्थापना गरिएको रामपुर नगरपालिकास्थित अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । वि।स। २०५५ मा २८ जना युवाले..
एक अर्बको हाराहारीमा राजस्व असुली
रसुवा । उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामग्री दिन प्रतिदिन नेपाल भित्रने क्रम बढेपछि रु एक अर्बको हाराहारीमा राजस्व असुली भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल कोइरालाका अनुसार कपडा, जुत्ता, बच्चाको..
चेम्बर प्रदर्शनी २०७४ को उद्घाटन : मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएकोमा राष्ट्रपति चिन्तित
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिँदै गएकाले आयात प्रतिस्थापन अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ । बिहीबारदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको चेम्बर प्रदर्शनी २०७४ को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले..
बिहीबारदेखी भृकुटीमण्डपमा चेम्बर एक्स्पो, ८ वटा मुलक सहभागी हुने
काठमाडौं । विहीबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०७४’ सुरु हुने भएको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक्स्पो सम्बन्धमा जानकारी गराएको हो । एक्स्पोको उद्घाटन..
११ बर्षपछि फेरी बजारमा आयो किन्ले, मूल्य २५ रुपैयाँ
काठमाडौँ । कोकाकोला नेपालले बजारमा ‘किन्ले ब्राण्ड’ को पानी पनि बेच्ने भएको छ। मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी कोकाकोलाले किन्ले ब्राण्डको पानी सार्वजनिक गरेको हो। किन्ले ब्राण्डको शुद्ध पिउने पानीको ब्राण्ड..
०१२३४५६, १२३४५६ नम्बरबाट फोन आए नउठाउनुस: नेपाल टेलिकम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना फोन प्रयोगकर्तालाई म्यासेज पठाउँदै ०१२३४५६, १२३४५६ जस्ता अपरिचित नम्बरबाट आउने कल नउठाउनु हुन अनुरोध छ। टेलिकमले आफ्ना नेटवर्कभित्र रहेका ग्राहकलार्इ विगत दुर्इ महिनादेखि विभिन्न मोबाइल प्रयोगकर्तालार्इ..
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफको भाइबर सेवा सुरु
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले रेमिटान्स क्षेत्रमा पहिलो पटक भाइबर सेवा सुरु गरेको छ । भाइवर सेवामार्फत ग्राहक महानुभावहरुले सहज रुपमा आफ्नो मोवाइल ल्यापटप, ट्यावलेट, कम्यूटर लगायतबाट रेमिट्यान्स सेवाको सम्पुर्ण..
हाथवे इन्भेष्टमेन्ट आफ्नै भबनमा, अब प्राईभेट इक्यूटी र भेन्चर क्यापिटल संचालन गर्ने
काठमाडौं । आइएमई समुहद्वारा प्रवर्द्धित हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल, लैनचौर स्थित आफ्नै भवन हाथवे कम्प्लेक्समा सरेको छ । नयाँ भवनको उदघाटन कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले गरे। सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले आगामी दिनमा..
आजबाट रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा
काठमाडौं । शुक्रबारबाट रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बानेश्वरस्थित कृष्ण टावरबाट सेवा शुभारम्भ गरेको छ । कात्तिक २६ गते कारोबार गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीले शुरुवातबाटै ३ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको..
Results 889: You are at page9of 30